क्रान्तिकारी माओवादीका धेरै जोडी हुल बाँधेर एमाओवादीमा जाँदै ! | Hakahaki
क्रान्तिकारी माओवादीका धेरै जोडी हुल बाँधेर एमाओवादीमा जाँदै !
३० चैत, काठमाडौं । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीबाट धेरै जोडीहरु हुल बाँधेर एमाओवादीमा जादैछन् । शीर्ष नेतृत्वदेखि केन्द्रीय समितिका कयौं जोडीहरु एमाओवादीमा जान लागेका हुन् ।
तस्बिर : जनपाटी
क्रान्तिकारी माओवादीका वैद्य पछिका दोस्रो तहका नेता रामबहादुर थापा बादल एमाओवादीमा जादा उनले आफ्नो श्रीमती नयनकला थापालाई पनि लिएर जादैछन् । जनयुद्ध कालमा पम्फा भुसालसँग बादलको प्रेम प्रसङ्गले उनको राजनीति समेत धेरै पछाडि परेको थियो ।
अहिले उनै बादल जसको राजनीति प्रचण्डले समाप्त पारे, अहिले उनै प्रचण्डकहाँ जादैछन् ।
बादलपछि तेस्रो वरियतामा रहेका देव गुरुङ एमाओवादीमा जाने क्रममा उनले आफ्नो श्रीमती यशोदा सुवेदीलाई लिएर जादैछन् । यशोदा सुवेदी हाल वैद्य मओवादीमा पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।
यो जोडीले माओवादी संसद् र सरकारमा जादा मन्त्री र सांसद पद पड्काएको थियो । गुरुङ धेरै पटक सांसद र मन्त्री समेत भए भने यशोदा सुवेदी सांसद मात्र भएकी थिइन् ।
त्यसैगरी बादल पक्षका अर्का प्रभाशाली नेता हितमान शाक्य एमाओवादीमा जाने क्रममा उनले आफ्नो श्रीमती अमृता थापालाई लिएर जादैछन् । अहिले शाक्यको जिम्मेबारी स्थायी समिति सदस्य हो । अनि अमृता थापाको वैद्य माओवादीमा पोलिटब्युरो सदस्य जिम्मेबारी रहेको छ ।
यो जोडीले माओवादी शान्तिकालमा आएपछि धेरैपटक सांसद पद पाए पनि मन्त्री बन्न भने पाएन । हितमान शाक्यले धेरैपटक मन्त्री बनाउन प्रचण्डलाई अनुरोध गरे पनि प्रचण्डले अस्वीकार गरेपछि हितमान रिसाएका थिए ।
हितमानका श्रीमती अमृता थापा भने सांसद मात्र होइन संसद् विकास समितिका सभापति समेत भएकी थिइन ।
बादल पक्षका अर्का नेता कुलबहादुर केसी सोनाम पनि एमाओवादीमा जाने क्रममा उनले आफ्नो श्रीमती तारा घर्तीलाई लिएर जादैछन् । कुलबहादुर सांसद नभएपनि उनको श्रीमती तारा घर्ती पटक पटक सांसद् भएकी थिइन । अहिले केसी वैद्य माओवादीमा स्थायी समिति सदस्य हुन् भने तारा घर्ती केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
एमाओवादीमा जाने अन्य केन्द्रीय सदस्यहरुको लाल जोडी यस्तो छ ।
वैद्य माओवादीको पोलिटब्युरो सदस्यहरुमा सुर्य सुवेदी पथिक एमाओवादीमा जादै गर्दा उनले आफ्नो श्रीमती इन्दु बस्नेतलाई लिएर जादैछन् । बस्नेत वैद्य माओवादीमा केन्द्रीय सदस्य छिन् ।
शान्तिकालमा आएपछि कुनै लाभ प्राप्त नगरेको यो जोडी अब एमाओवादीमा गएर केही लाभ लिनु पर्छ भन्ने मनसायमा रहेको वैद्य पक्षका मान्छेहरुले भन्ने गरेका छन् ।
दिलीप प्रजापति भीष्म पनि एमाओवादीमा जादा उनले आफ्नो श्रीमती उर्मिला श्रेष्ठलाई लिएर जादैछन् । प्रजापति वैद्य माओवादीमा छदा पोलिटब्युरो सदस्य हुन् भने उनको श्रीमती उर्मिला केन्द्रीय सदस्य मात्र हुन् ।
एमाओवादीमा जाने अर्का जोडीमा पोलिटब्युरो सदस्य पवनमान श्रेष्ठ र उनको श्रीमती जयन्ती लुँइटेल पनि परेका छन् । पवनमान एमाओवादीमा पोलिटब्युरो सदस्य हुन् भने उनकी श्रीमती जयन्ती केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
बादल पक्षका मान्छेहरुले दिलीप प्रजापति र पवनमान श्रेष्ठलाई आफ्नो पक्षमा आएको दाबी गरेको छ भने वैद्य पक्षका नेताहरुले आफ्नै पक्षमा भएको बताइरहेका छन् । उनीहरु अहिले बीचमा रहेको पनि बताइएको छ ।
त्यसैगरी एमाओवादीमा जाने अन्य जोडीहरुमा केन्द्रीय सदस्यहरु दाबा तामाङ र कुमारी मोक्तान रहेका छन् । उनीहरु दुबै केन्द्रीय सदस्यहरु हुन् । शान्तिकालमा आएपछि उनीहरु दुबै सांसद पद हासिल गरेका जोडीभित्र पर्छन् । जनपार्टीले लेखेको छ ।